NUGEN သည်တေးဂီတနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများအတွက်ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Audio Post Plug-In များကိုကမ်းလှမ်းသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NUGEN သည်တေးဂီတနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများအတွက်ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Audio Post Plug-Ins များကိုပေးသည်
Los Angeles, နိုဝငျဘာ 7, 2019 - ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တေးဂီတရောနှောသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ထိပ်တန်းအသံတည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအမှတ်တံဆိပ်အနေဖြင့် NUGEN Audio သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ Mix Engineer Jorel Corpus သည် GRAMMY ၏ဝန်းကျင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်သူအစုအဝေးတစ်ခုမိတ္တူကိုရရှိသောအခါ၎င်းသည်ဂီတနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများအတွက်သူ၏လက်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်ဖြစ်သည်ကိုမကြာမီသူသဘောပေါက်လာသည်။
Corpus ကရှင်းပြသည်မှာ software ကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီသူသည် NUGEN အကြောင်းကြီးကျယ်သောအရာများကိုကြားခဲ့ရပြီး plug-in များကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအလျင်အမြန်နားလည်ခဲ့သည်။ သူက "ကျွန်မယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် NUGEN ကိုအသုံးပြုကြသည်။ “ ငါကုမ္ပဏီရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုခဏလောက်သုံးချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Producer အစုအဝေးကိုရတဲ့အခါအချိန်ကောင်းပဲ။ NUGEN ကိုကျွန်တော်စသုံးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပို၍ စိတ်ချရသည်။ client များငါ့ကိုအချက်ပြ mono သို့မဟုတ်စတီရီယိုရှိမရှိချက်ချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ငါ့ကိုဖိုင်တွေပေးပို့တဲ့အခါငါ Visualizer အသံ plug-in ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ငါ Stereoizer နဲ့ Stereoplacer ကိရိယာတွေကိုပုံမှန်သုံးတယ်။ ”
Producer အစုအဝေးတွင်တွေ့ရသော plug-in များအပြင် Corpus သည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗွီဒီယို ၀ ယ်လိုအားရှိသည့်ပရောဂျက်များတွင်အလုပ်လုပ်စဉ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသော NUGEN's Loudness Toolkit ကို VisLM အသံမီတာဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ “ ISL စတီရီယိုကန့်သတ်ချက်သည် VisLM အသံကျယ်မီတာနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ “ ISL သည်စတီရီယိုနှင့် mono အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ True Peak ကိုကန့်သတ်ပေးတယ်။ အရင်တုန်းကပြိုင်ဘက်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖက်မှုရှိမှာစိုးရိမ်မှာပါ။ NUGEN နဲ့ဆိုရင်မင်းဒါတောင်မစဉ်းစားဘူး။ NUGEN plug-in ကိုအသုံးပြုခြင်းကကျွန်ုပ်သည် Netflix၊ Amazon Prime သို့မဟုတ် hardline အသံကျယ်ကျယ်လိုအပ်သောရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ ”
NUGEN software ကိုသူ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် Corpus သည်သူယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သော plug-ins များကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ "သင့်မှာအလားတူအလုပ်မျိုးကိုလုပ်တဲ့အလားတူကိရိယာတွေရှိပေမဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုသုံးဖို့သင်ဆွဲဆောင်တယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ “ NUGEN ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုကျွန်ုပ်၏ထုတ်လုပ်မှုများတွင်နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ငါလုပ်နေတဲ့အရာဟာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါငါ NUGEN ကိုသုံးမယ်။ ”
၎င်းထုတ်ကုန်များအပြင် Corpus သည် NUGEN အသံအဖွဲ့မှသူရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုကိုလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်သည်။ သူကဆက်ပြောသည် -“ NUGEN သည်နာမည်ကောင်းရှိပြီးသူနှင့်ကျွန်ုပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့်အခါတိုင်းသူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ “ NUGEN ဟာဒီရူးသွပ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ငါလိုလူတွေကိုအမှန်တကယ်ကူညီတယ်ဆိုတာသိရခြင်းကအားရှိစရာပါပဲ။ သူတို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစဉ်းစားရန်နှင့်စိတ်ပူစရာနည်းစေသည်။ ငါတို့ရဲ့ထောင့်မှာအသင်းဖော်ကောင်းတစ် ဦး ရှိတယ်ဆိုတာသိရတာကအံ့သြစရာပါပဲ။
Corpus သည် Grammy နှင့် Emmy အသိအမှတ်ပြု Billboard ဖြစ်သည် #1 Brandy, Tyrese, Boyz II Men, JJ Lin, GEM နှင့် Disney ဖျော်ဖြေပွဲများပါ ၀ င်သည့် US နှင့် Asia ရှိဂီတထုတ်လုပ်သူ၊ အသံအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဂီတအနုပညာရှင်ကိုချီးမြှင့်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုတွင်သူ၏အကြွေးများပါဝင်သည် အဆိုပါ နှင်းဖုံးနေ့ အမေဇုံချုပ်အပေါ်နှင့် မိသားစုပုံစံ Justin Lin ၏ YOMYOMF နှင့် Warner Bros. Stage 13 Platfrom အောက်တွင်ထုတ်ဝေသောအာရှစားသောက်ဖွယ်ရာပြပွဲ၊ မကြာသေးမီက AdWeek ARC ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီ Windy ဇာတ်ကားများအတွက်စီမံကိန်းများအပြင် သူသည် Indie Pop Films၊ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံဖြစ်သော Live-action နှင့် stop-motion ကာတွန်းထုတ်လုပ်သည့်အိမ်နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင်ဆုများရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ NUGEN ထုတ်လုပ်သူဆော့ဝဲအစုအဝေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ, NUGEN အသံရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်မိသားစုနှင့်အတူမှာရရှိနိုင် www.nugenaudio.com။ ရှိသမျှသည်အခြားသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလျ protected].
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ audio audio plug-in ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor NUGEN အသံ အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-11-08
ယခင်: PMC သည်စတူဒီယိုအမျိုးမျိုးကို Pro Audio Audio Monitors အတွက်၎င်း၏ထိုင်းဖြန့်ချိသူအဖြစ်ခန့်အပ်သည်
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအထူးကု - Paid Spring, 2020 အလုပ်သင်